System76 inotangisa makomputa maviri neCoreboot kutsiva yayo BIOS | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji venyu pamwe munofunga nezve inoshanda system kana iwe ukaverenga chimwe chinhu nezvayo System76. Iyo Colorado-yakavakirwa kambani inogadzira akati wandei zvigadzirwa, pakati payo iri iyo inoshanda system POP! _OS, asi zvakare inogadzira makomputa senge maviri matsva ayo atovepo pre-odha. Kana zvikwata zvitsva izvi zviri nhau dzakakodzera kuburitswa, imhaka yekuti vakaita shanduko isingafarire munhu wese zvakaenzana.
Makomputa anogona kuchengetwa kubvira nezuro ndiwo Galaga Pro and the Dart Pro. Mapoka ese ari maviri anosvika ne Coreboot pachinzvimbo cheBIOS yechinyakare, yakavhurwa sosi firmware yakagadzirirwa kuve yakajeka pane kodhi uye kuwedzera kuchengetedzeka Kune rimwe divi, iyo zvakare inobvumidza iyo inoshanda sisitimu kubhuroka 29% nekukurumidza, chimwe chinhu icho ini pachezvangu chandinofunga chinonyanya kutsanangurwa kwekushambadzira pane chimwe chinhu chinonyanya kubatsira muhurongwa hwekushandisa iyo yatove bhutsu inomhanyisa nemasikirwo.
System76's Coreboot bhutsu 29% nekukurumidza kupfuura BIOS
Izvo zvese zviri zviviri zvemakomputa zvinogoverana ndiyo yekushandisa system, kukwanisa kusarudza pakati pePOP! _OS 19.10, POP! _OS 18.04 uye Ubuntu 18.04. Iyo System76 system yakavakirwa paUbuntu, saka ese matatu sarudzo ndidzo dzinogoverwa zvinoenderana neCanonical yekushandisa system. Zvinoshamisa kuti imwe yesarudzo ndiEoan Ermine, asi haifadzi zvakanyanya kana tichifunga kuti, pavanotanga kutumira, Ubuntu 19.10 inenge yatoburitswa zviri pamutemo.
Kana zviri izvo zvinotsanangurwa, vese vanogovana mazhinji acho, kuwanikwa ine 5th chizvarwa i7-iXNUMX processor, ine 1920 × 1080 resolution uye mukana wekuwedzera iyo RAM kusvika pa32GB ye RAM, asi iyo Darter ine mamwe masimba senge yakakura skrini (14 ″ iyo Galaga uye 15.6 ″ iyo Darter), yakajeka keyboard, bhatiri rakakwirira uye zviri nani odhiyo system, asi zvakare inorema zvishoma (300g zvimwe).
Kana iri yemutengo wekutanga, Iwo ari e $ 949 uye $ 999, iyo Darter inogona kusvika $ 2.131 kana isu tichiwedzera iyo RAM, iyo hard drive kune yakanyanya sarudzo uye sarudza i7 processor. Dambudziko guru randinoona nderekuti parizvino pane chete American kana yeBritish keyboard sarudzo.
Pasina mubvunzo, aya mapoka anonakidza, asi, senguva dzose, panguva yekuvhurwa kwayo haina kukosha kunze kwenyika dzeAnglo-Saxon. Ungave uchifarira kana / painowanikwa nekhibhodi yenyika yako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » System76 inotangisa makomputa maviri neCoreboot ichitsiva iyo BIOS